ကျနော်တို့ ServiMatango C.A. = န်ဆောင်မှုများ Matango
Servimatango C.A. ကုမ္ပဏီတစ်ခုအွန်လိုင်း၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီလူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရည်စူးထားတယ်.
ကျနော်တို့ကကုမ္ပဏီ Ibarra-Imbabura-အီကွေဒေါ၏မြို့အတွက်ဌာနချုပ်နှင့်အတူအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်စီးပွားရေးအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်. VoIP အတွက်ငှားရမ်းခဝန်ဆောင်မှု dedicated server များထောက်ပံ့အပေါ်၎င်း၏လုပ်ငန်းများအထူးပြု, hosting, Web ကို အသုံးပြု. ဒိုမိန်းနှင့်အသုံးပြုသူသည်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြေရှင်းချက်.
ကျနော်တို့ဆန်းသစ် features တွေပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုန်ဆောင်မှုများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ပြိုင်ဘက်အနားမှာရပ်နေ, စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်, အထူးပြုအလုပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအုပ်စု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားန်ဆောင်မှု.
တချို့ကအချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ Imbabura ၏ပြည်နယ်မှာ; Franklin နှင့် Nelly တို့သည်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကွီးနှစျအမြော်အမြင်: "Ibarra-အီကွေဒေါကြီးသောအမှုတို့ကိုလုပ်နိုင်စုံစမ်း".
ဒါကြောင့်လဲအောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့၏လမ်းစတင်: အတွက်အကောင်အထည်ဖော် 2008, ဝန်ဆောင်မှုငှား / ငှားရမ်း ServerVoip.com Server များ; လူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအင်တာနက်တယ်လီဖုန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီ (VoIP) နှင့် Alosip.com နှင့်အတူလက်, အင်တာနက်ကိုကျော်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်မိနစ်ပေး.
ဤဝန်ဆောင်မှုများ၏ဆက်လက်ကြီးထွားမှုကြောင့်, သူ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်နှင့်တရားဝင်နာမည်ကိုမှတ်ပုံတင်: Matango န်ဆောင်မှုများကုမ္ပဏီလီမိတက် “ServiMatango C.A”.
အတွက်စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည် 2012 သူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမျိုးစုံန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်. ထိုသို့မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, VoipSwitch ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူဆာဗာများငှားရမ်းအင်တာနက်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရန်, ဒါဟာကုမ္ပဏီ၏ကျောရိုးသည်.
ကျနော်, Franklin သခွားသီး:
“ငါသည်ငါ့ compatriots ကိုပြချင်တယ်, ဘဝအောင်မြင်မှုရရန်အခြားနိုင်ငံများသို့ထွက်ခွာရန်မလိုအပ်ပါ. ဤနေရာတွင်အီကွေဒေါအတွက်ဖြစ်စေသူတို့ drive ကိုအတူနေထိုင်ရာနိုင်ငံအတွက်, လေ့လာ, ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု; သင်ပြင်အခါသင်ရသောသူတို့သည်လည်းထိုတူညီသောဆန္ဒနှင့်တကွသင်ကြီးသောအမှုတို့ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်”.
မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် S က ServiMatango.com: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံရန်
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောဒေသများရှိမြင့်မားလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အထူးပြုပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်: နည်းပညာကို, software ကို, တိုးတက်ရေး, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, e-စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ပုံစံ, ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည့်အသိပညာနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု.
သူ Andrea Maldonado
မင်္ဂလာပါကျနော် Franklin Matango ဖြစ်ကြောင်းကို, ကိုယ့် ServiMatango အတွက်ပူးပေါင်းနှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်ပြည်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ရည်စူး.
မင်္ဂလာပါကျနော် Nelly Matango ရယ်, ကိုယ့် ServiMatango အတွက်ပူးပေါင်းနှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်ပြည်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ရည်စူး.
မင်္ဂလာပါကျနော်သူ Andrea Maldonado ရယ်, ကိုယ့် ServiMatango အတွက်ပူးပေါင်းနှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်ပြည်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ရည်စူး.
Software ကို Developer
မင်္ဂလာပါကျနော်ဖာနန်ဒို Molina ရယ်, ကိုယ့် ServiMatango အတွက်ပူးပေါင်းနှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်ပြည်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ရည်စူး.
မင်္ဂလာပါကျနော် Jessenian Tequiz ဖြစ်ကြောင်းကို, ကိုယ့် ServiMatango အတွက်ပူးပေါင်းနှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်ပြည်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ရည်စူး.
မင်္ဂလာပါကျနော်အိန်ဂျယ်Cedeñoရယ်, ကိုယ့် ServiMatango အတွက်ပူးပေါင်းနှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်ပြည်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ရည်စူး.